Xulka cayaaraha | Radio Himilo | Page 20
Home / Xulka cayaaraha (page 20)
Hazard oo amaanay Macalin Conte.
radio himilo September 19, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 47 Views
Muqdisho – Xiddiga Chelsea, Eden Hazard ayaa horumaray toddobaadka kaliya markii uu la shaqeeyey macalin Antonio Conte gudaha garoonka Stamford Bridge. Hazard ayaa laba sano kaga hoos shaqeeyey Chelsea macalin Jose Mourinho, kahor inta uusan beddelin Conte xagaagii hore. Xagaagii ugu horreeyey, ...
Shanghai Shenhua – “Tevez sidaan ka filaynay manoqon”
radio himilo September 19, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 54 Views
Muqdisho – Guddoomiyaha kooxda Shanghai Shenhua, Wu Xiaohui ayaa laacibka reer Argentine oo ay lacagta badan kasoo bixiyeen uu yahay fashil – mana uusan la kulmin filashadii ay ka sugayeen. Tevez ayaa 3 gool dhaliyay 13 kulan oo uu u ciyaaray kooxda ...
radio himilo September 17, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 69 Views
Muqdisho – Macalinka kooxda Manchester City, Pep Guardiola ayaa ku qeexay halyey weeraryahanka kooxda, Sergio Aguero kadib markii uu laacibkan u dhaqaaqay rikoor-ka gool dhalineed ee ugu sarreeya City, wuxuuna labo gool usoo jirsaday laacibka ugu goolasha badan taariikhda City. ...
Paul Pogba oo 12 toddobaad ku maqnaan doona dhaawac.
radio himilo September 17, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 44 Views
Muqdisho – Xiddiga Manchester United, Paul Pogba ayaa laga yaabaa in uu maqnaado 12 toddobaad kadib markii uu dhaawac adag soo gaaray toddobaadkii hore markii kooxdu ay wajahday Basel. Qadkan dhexe ayaa dhaawac muruqa ah la kulmay qeybta hore kulankii ...
radio himilo September 17, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 47 Views
Muqdisho – Barcelona ayaa xaqiijisay in Ousmane Dembele uu wajahayo maqnaashjiyo gaaray saddex bilood iyo bar illaa afar bilood kadib markii uu laacibkan dhawaan gal ah uu soo gaaray dhaawac muruqa ah. 20-jirkan ayaa yimid Camp Nou isaga oo kasoo ...
“Ma dhacayso in Messi lala barbar-dhigo Mbappe.”
radio himilo September 16, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 58 Views
Muqdisho – Macalin Pep Guardiola ayaa saadaaliyay haddii laacibka Mpape uu gaari karo heerka laacibka Messi uu ka gaaray kubadda cagta – wuxuuna ka digay in qofna uusan la miis fariisan karin laacibka Argentine. Guardiola waxay xilli kulul lasoo qaateen Monaco ...
Mourinho oo sheegay beddelkii buuxin lahaa booska Pogba
radio himilo September 16, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 48 Views
Muqdisho – Macalinka Man United, Mourinho ayaa sheegay in Pogba uu maqnaan doono kulamo dhowr ah kadib dhaawicii soo gaaray. 24-jirkan saameynta leh waxaa laga saaray daqiiqadii 19aad ciyaartii Basel ee UCL ay kaga adkaadeen. Pogba oo tiir-dhexaad guulaha bilowga ...
radio himilo September 14, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 47 Views
Muqdisho – Tababaraha Manchester United, Jose Mourinho ayaa lagu soo warramayaa inuu doonayo in uu wada hadalo qandaraas ah la yeesho qadka dhexe ee kooxda Arsenal, Mesut Ozil. Heshiiska haatan uu ku joogo laacibkan reer Jarmal waqooyiga London ayaa dhacaya ...
Leon Osman: ‘Everton waxay ku fashilantay inay beddel u hesho booskii Lukaku.’
radio himilo September 14, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 43 Views
Muqdisho – Everton ayaan helin badelka Romelu Lukaku kadib markii uu weeraryahanka xagaagan u dhaqaaqay Manchester United, sida laga soo xigtay Leon Osman. Ciyaaryahankan heerka caalami ee dalka Belgium ayaa saameyn degdeg ah ku yeeshay Old Trafford ka dib markii ...
Mourinho oo ka cabsi qaba inu Pogba uu muddo ka maqnaado garoomada.
radio himilo September 13, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 52 Views
Muqdisho – Xiddiga reer France ayaa laga yaabaa inuu garoomada ka maqnaado muddo, kadib dhaawac muruqa ah oo soo gaaray laacibkan, sida laga soo xigtay macalinka kooxda Manchester United. Tababaraha Manchester United, Jose Mourinho ayaa rajeynaya in xiddiga khadka dhexe ...